အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ - ကျေးကျွန်၏ကျွန်ုပ်တို့၏ရေးအဖွဲ့
- Silbano Garcia က, II ကို။
Olga နှင့်ငါသည်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်အဘို့အနာဂတျအကွောငျးစိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းကမ္ဘာပါပြီသောနှစ်ဆယ်တစ်နှစ်ကာလအတွင်းခရစ်တော်ထံသို့လာကြပြီ။ တစ်ဦးချင်းစီနှင့်နေ့စဉ်ပိုပိုပြီးလူတွေကိုဘုရားသခငျ၏တရားစကားတော်နှင့်သခင်ရဲ့ဘုရားကျောင်းနှင့် ပတ်သက်. အမှန်တရားရှာဖွေနေကြသည်။ ကျနော်တို့ထာဝရဘုရားနှင့်ဘုရားသခင်၏မိသားစုတာဝန်ထမ်းဆောင်၌အကြှနျုပျတို့၏အစွမ်းကုန်လုပ်ဖို့အပေါင်။ လူတိုင်းထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အဖိုးတန်, ငါတို့သည်လူတိုင်းနှင့်အတူခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဝေမျှချင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ၏အသိပညာနှင့်ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အရပ်ထဲမှာကြီးထွားသကဲ့သို့သင်တို့ကိုဘုရားသခင်အားပိုမိုနီးကပ်စွာဆှဲမညျသောငါတို့ဆုတောင်းပဌနာသည်။
ဘုရားသခငျသညျရဲ့အကူအညီနဲ့ငါတို့သည်သင်တို့ကမ္ဘာ၏သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်လူတိုင်းကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုပြန့်ပွားအတွက်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများနှင့်အသိပညာများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြုလိမ့်မည်။ သခင်ဘုရား၌နှင့်သူ၏တန်ခိုးကြီးခြင်း၏တန်ခိုးအားဖြင့်ခိုင်ခံ့နေပါ။ ယရှေုသညျသငျသညျကိုခစျြ!
CEO ဖြစ်သူ / တည်ထောင်သူ
မှာအွန်လိုင်း COCBN - Hammond ဟာ Burke ကခရစ်တော်အားအသံလွှင့်ကွန်ယက်၏ဘုရားကျောင်း၏ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါသည် www.cocbn.com.
အစ်ကို Hammond ဟာအင်တာနက်မှတဆင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဧဝံဂေလိမြှင့်တင်ရန်တစ်ဦးစုစုပေါင်းအားထုတ်မှုအင်တာနက်ဝန်ကြီးဌာနများပူးပေါင်းခဲ့သည်။ တကျိပ်နှစ်ပါးသောနှစျကျြောသူကသူတို့ရဲ့နည်းပညာလိုအပ်ချက်နှင့်အတူအသင်းတော်များစွာကူညီခဲ့သည်။ သူကတက္ကဆက်ပြည်နယ် Dallas ခရစ်တော်၏ Mountain View ဘုရားကျောင်းနှင့်အတူစတင်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များအကြားတိုက်ရိုက်လွှင့်သောဗီဒီယိုများအတွက်လမ်းရှေ့ဆောင်လျက်ရှိသည်။ Hammond ဟာ Burke ကနှင့် Silbano Garcia က, II ကိုအင်တာနက်ကဝန်ကြီးဌာနများအွန်လိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ redevelop နှင့်တိုးတက်စေရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ပါပြီ။
"ဒီနှစ်ခုမှာဝန်ကြီးဌာနများဝက်ဘ်နှင့်လွှင့်မီဒီယာနည်းပညာနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အတူခရစ်တော်၏အသင်းတော်များပေးအံ့သောငှါစည်းဝေးကြပါပြီ။ ကျနော်တို့ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဝဘ်နည်းပညာကို အသုံးပြု. ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားပျံ့နှံ့ကူညီဖို့ထွက် set အဖြစ်လာရန်ရက်ပေါင်းနှင့်နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် ။ ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝန်ထမ်းကသူတို့ရညျရှယျချဲ့သောကြောင့် tools တွေကိုသုံးပြီးဝန်ကြီးဌာနကအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တည်ထောင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ " - Hammond ဟာ Burke က
မိုက်ကယ် Clark က 1997 ကတည်းကကွန်ပျူတာနည်းပညာများအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်အင်တာနက်ကဝန်ကြီးဌာနများတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကိုမိုက်ကယ်ကွန်ပျူတာနည်းပညာများ၏လယ်ပြင်တွင်နှစ်ဆယ်သုံးနှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ မိုက်ကယ် Verizon ကတစ်စနစ်များအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်, Winward အိုင်တီ Solutions မှတစ်ဦးအကြီးတန်းအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်, Sprint များအတွက်စနစ်များ Analyst, အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကွန်ယက်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်တွေမိုက်ကယ်ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ 1997 ခုနှစ်တွင်သူသည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ Windows NT Operating System ကိုရန်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Microsoft ကလုပ်ငန်းဆာဗာ Operating System ကိုအတူကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်အတွက်နျဆာပခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျနော်တို့ကို Microsoft Windows NT မှာဆာဗာများဖို့ Unix Operating System ကိုကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့စစ်ဆင်ရေး၏ကုန်ကျစရိတ်များအပေါ်ကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက် Unix ကကမ္ဘာသို့ပြန်သွားကြပြီ။ ကျနော်တို့အိုင်တီ Solutions နှင့်ကွန်ယက်အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုအတွက်မိုက်ကယ်ရဲ့အားသာချက်အပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများကွန်ပျူတာနည်းပညာများအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်သူ့ကိုရှိသည်ဖို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ကယ် Clark ကပန်းကုံး, တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်ခရစ်တော်၏ Saturn လမ်းအသင်းတော်ကိုသစ္စာရှိသောခရစ်ယာန်နှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်းရှိ Dallas, Texas ပြည်နယ်ဧရိယာတစ်ဦးအကျဉ်းထောင်မှခရစ်ယန်ဂိုဏ်းသင်းအုပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အဆိုပါ USN အတွက် 10 နှစ်ပေါင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက်ကျွန်မတက်ကြွတာဝန်ကနေဖြန့်ချိခဲ့သည် [နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦး LCDR, USNR အဖြစ်အငြိမ်းစား] ။ ကြှနျတေျာ့ကိုနောက် 23 နှစ်ပေါင်း Rochester, NY အတွက် Eastman Kodak Co. , အလုပ်လုပ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ငါ၏အမှုတစ်ခုလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်စီးပွားရေးနှင့် Professional ကထုတ်ကုန်တိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အကြှနျုပျ၏ဒုတိယအငြိမ်းစား 52 ၏အသက်အရွယ်မှာ Eastman Kodak စီမံခန့်ခွဲမှုကနေဖြစ်ခဲ့သည်။
အကြောင်း 10 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျွန်မရဲ့အခွက်သုံးပါနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းနည်းငါတို့သခင်နှင့်ခမည်းတော်ထံမှဖုန်းခေါ်ဟုလျှောက်ကြ၏။ ကွန်ပျူတာများကိုယခု 50 နှစ်ကျော်အဘို့အကြှနျုပျ၏အဓိကရုံး tool ကိုပါပြီ။ တင်ဆက်ဖို့အောက်ပါနှစ်အတွင်းမှာတော့ကိုယ့်သူငယ်ချင်းနှင့်အသင်းတော်များအဘို့အများအပြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ခရစ်တော်ကအင်တာနက်ဝန်ကြီးဌာနများ၏ချာ့ရှာတွေ့ပြီးနောက်, ငါ့ဇနီးနဲ့ကျွန်မဇွန်လ 2014 အတွက်ခရစ်တော်၏ Deltona ဘုရားကျောင်းထဲသို့ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသည်။ သင်ဒီမှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, [ငါဖွံ့ဖြိုးစေသည်] ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Facebook စာမျက်နှာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် www.deltona-church-of-christ.org
အင်တာနက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာအဝှမ်းမှချက်ချင်းဆက်သွယ်ရေး၏နည်းလမ်းများပေးပါသည်။ လက်ရှိနှင့်အသစ်သောသားစဉ်မြေးဆက်ဒီအရင်းအမြစ်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်သာသနာပြုအရာ၌အဖြစ်, ငါတို့သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုအကြောင်းသင်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တို့အားယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုရောက်စေဖို့ဒီသယံဇာတအသုံးပြုရမည်။ ဤသူကားငါ၏ခေါ်ဆိုမှုနှင့်ရလဒ်များကိုသက်သေပြခဲ့သည်။
Olga Garcia ကအင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ သူမသည်အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများအဘို့အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအီးမေးလ်များကိုရာပေါင်းများစွာသောခံယူခြင်း, Olga ကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ငယ်ရွယ်မင်းသမီးထံမှအီးမေးလ်များကိုဖြေကြားကူညီပေးသည်။ အစ်မ Olga လက်ရှိတွင်အွန်လိုင်းအင်တာနက်ကဝန်ကြီးဌာနများနှင့်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်အကျိုးရှိမည်သစ်ကိုကို web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာများ၏နံပါတ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သင်ယူသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အပေါ်သူမ၏ရှိသည်ဖို့အမှန်တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါတယ်။
"အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီသားထွက်သို့ရောက်ရှိများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါငါတတ်နိုင်သမျှအပေါငျးတို့သညျထာဝရဘုရား၏နှင့်သူ၏နိုငျငံတျောသညျအစေခံရန်လုပ်ဖို့လိုကြသည်။ ဘုရားသခင့ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်!" - Olga Garcia က
မူပိုင်ခွင့်© 1995 - 2019 အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ။ ခရစ်တော်၏အသင်းတော်များ၏တစ်ဦးကဝန်ကြီးဌာနက။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။